Bathroom Double Towel Hook Bronze Goridhe
musha / zvishongedzo / Bathroom accessories / WOWOW Akakwesha Goridhe Towel Hooks
Bata vatengi kuitira kuti ugamuchire mahara tauro hook: sales@wowowfaucet.com, chipo chepachena uye kutumira kwemahara.
imba yekugezera yakapetera machira maviri ichapa kumabhawa ekugezesa, imba yekuchengetera, zvakare mechi yemakamuri yekurara, kicheni, yekugezera, uye yekuwachira, yekuwachira, nzvimbo yekutandarira, uye mahara.
Bronze goridhe yokugezera hook 4020301BGD zvakawanda
Yakagadzirwa yepamusoro-notch sus 304 isimbi isina tsvina inoona kusimba uye kuvimbika.
Yakatetepa Yakabhururuka PVD Zirconium Goridhe kupedzisa haina kuratidza chero nzvimbo uye inomira zuva nezuva, kutarisirwa kwezuva nezuva kwakatwasuka, kunochengetedza kutaridzika kwayo uye kwakakwana kutaridzika nyore. Iyo dhizaini yemazuva ano inorongedza neyakawanda imba yekushongedza uye inopa yakawanda nzvimbo yekurembera zvinhu munzira yekupinda, yekuwachira nzvimbo, yekugezera, uye yekurara.
Zvinodhura-Zvinogadzira Zvigadzirwa - mutengo unoshamisira wechinhu chemhando yepamusoro, kusarudzwa kwakakwana kwechimbuzi.
Zvakareruka kuisa, uye kukwidza Hardware kunosanganisirwa
Kana iwe uchida kutenga kubva kuAmazon kana kuenzanisa mitengo, tinya apa: Double Robe Hooks Gold
SKU: 4020301BGD Categories: zvishongedzo, Bathroom accessories, Featured Deals Tags: Bronze Goridhe, Wall Hook, Wall Walled
WOWOW Stainless Simbi faucet Yakabata Matema ne ...